ခိုင်ခံ့ပီး ကြာရှည် အသုံးခံသည့် စတီးလ် ရေစည် နှင့် ရေတိုင်ကီ ( Steel Filter Tanks )
ခိုင်ခံ့ လှပပီး အသုံးပြုရ လွယ် ကူသော စတီးလ် စားပွဲ ( Steel Table )
မျက်နှာ ပြင်နှစ်ခုပါ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ သုံး ဂတ်စ် မီးဖို (2burner gas stove )
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 133229 view counts
Brand : Baho
Model : Baho
လုပျငနျးအမညျ : Baho Pipe, fitting Accessories & Sanitaryware Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09 793640355, 09 5021501, 09 5074844, 09 73242486
Structure : Ball
Temperature of Media : High Temperature
Standard of Nonstandard : Standard
Stainless Steel : 2piece
Application : General
စတီးဘောလုံးအဆို့ရှင် ကို စတိန်းလက်စတီး 304,316,CF8,CF8Mဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အနားကွပ်ဒီဇိုင်း နှင့် အမည်ခံဖိအားမှာ PN Class150/300 ဖြစ်သည်။ ဖိအားစမ်းသပ်ခြင်းမှာ PT3.0/7.5MPa ဖြစ်သည်။ ရေရှည်အသုံးခံပြီး ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးရှိသည်။
Our business name is Baho Pipe, Fitting Accessories & Sanitaryware. Type of our business is pipe and pumps accessories. We have many kind of G.I, M.S, uP.V.C. We have two store that are situated in Insein, yangon.
အပြာရောင် ပလစတစ် ရေပိုက်များ
PEX Copper CPVC Pipe
Top quality profession brass gas valve lever hand
Welded Stainless Steel Pipe ss Fittings
May I get the quotation for "စတီးဘောလုံးအဆို့ရှင်" ?